Ihlaziyiwe kwiNkosana eNgconoyo ngaphezulu kweBrickyard Creek
Indlu yethu ibekwe kwihlathi laseBoreal kwaye ibekwe kwinduli engaphezulu kweBrickyard Creek kunye nomzila ecaleni kwayo. Kule ndawo yokusingqongileyo ezolileyo, "iikhabhinethi zezomhlaba zingekho emhlabeni". Ulwandle olunesanti kunye nomgodi womlilo kukuhamba ngemizuzu emi-5 ukuya kweli-10 usebenzisa umzila okanye iindlela. Indlu ehlaziyiweyo icocekile inendawo yomlilo yeenkuni ngeentsuku ezipholileyo kunye neveranda yesikrini ngeentsuku ezishushu. Kukho izinto ezingapheliyo ze-rec zangaphandle, iindawo zokutyela, iivenkile, umculo, iiwineries, igadi yeziqhamo kunye nokunye okuninzi okumgama omfutshane.
Nantsi imizekelo eyongezelelweyo ye-cottage:
* Ihlaziywe ngoJuni 2021 ngefanitshala entsha, ukumkanikazi phezu kwendlu yokumkanikazi ephezulu, ihombiso kunye nezinye iinkcukacha ezininzi.
*Ikhitshi ligcwele ngokupheleleyo
*Iigumbi lokuhlambela kwinqanaba eliphambili nangaphezulu
*Indawo yomlilo yamaplanga inokonwabela zombini kwigumbi lokuhlala kunye negumbi lokulala elikhulu
*Iveranda yindawo entle yokukhaba umva kwaye uphumle kunye netafile yokutyela yabantu aba-6 kunye nolunye ukhetho lokukhaba emva kwaye ukonwabele indalo engqongileyo.
I-Bayfield yimizuzu emi-5 yokuqhuba kunye neendawo zokutyela ezinkulu, ivenkile kunye nokunye. Phezulu kwiinduli ezingentla kwe-Bayfield, uya kufumana iifama ezinemizila yeewayini kunye neziqhamo zokuhlola. Thatha isikhitshane esisuka eBayfield uye eMadeline Island ukuze ufumane amava esiqithi kunye nedolophu encinci yaseLa Pointe kwizibuko lenqanawa. ICornucopia kunye nolunye uluntu lwaseLake Superior luqala imizuzu engama-20-25 kude kwaye lube neelwandle, iindawo zokutyela kunye nokunye okunokonwaba. I-Big Top Chautauqua yinkqubo emfutshane kwaye ineziganeko ezinkulu zomculo. Ebusika, kukho ukutyibilika ezantsi, ukutyibilika kwe-XC, ukuloba emkhenkceni, ukutyibiliza kunye nokunye okonwabela kule ndawo.
UKaren noBrian, abanini nababuki zindwendwe, bayafumaneka ngenkcazelo yoqhagamshelwano ekwisikhokelo se-Airbnb okanye se-Airbnb semiyalezo. Njengoko sisebenza phakathi evekini, imiyalezo okanye isicatshulwa sisebenza ngcono.